ANKINGAMELOKA - SAMBIRANO SY NY MANODIDINA : Fora zaza faobe
Taorian’ny tanànan’Ambanja dia anjaran’ny kaominina ambanivohitra Ankingameloka sy ny manodidina no nanatanterahan’i Darkhaooui Siritis Ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Sambirano fora zaza faobe tamin’ny herinandro teo. 4 septembre 2017
Mitohy hatrany araka izany ny asa soa ataon’ity Ben’ny tanàna ao amin’ny Distrikan’Ambanja ity. Zaza maherin’ny 100 no voafora nandritra ny hetsika ara-tsosialy nataon’i Darkhaooui Siritis tany an-toerana.
Naneho ny hafaliany ny raiamandreny ao Ankingameloka ary nisaotra sy nankasitraka amin’izao fihetisik’ity Ben’ny tanànan’Ambanja ity izao . Marihina fa anio no hamaranan’ity farany ny fora zaza faobe karakarainy ao amin’ny kaominina ambanivohitra Bemanevika andrefana. Maromaroa ny tahaka ny Ben’ny tanànan’Ambanja Darkhaoui Siritis hoy ireo Raiamandreny any amin’ny Distrikan’i Sambirano.